REHEFA ANY AMBANIVOHITRA (TAPANY III) – Blaogin'i Voniary
Araraoty ny fotoana iresahana amin’i Dadabe, Bebe, Dadatoa, rahavavy, anadahy sy ny sisa. Na dia sokajiana hoe tambanivohitra aza izy ireo dia afaka mifanakalo hevitra sy mifampizara aminao. Tsy ary hitovy ny tadin-dokanga fa raha miezaka mamantatra ireo havanao sy mizara aminy ny tontolonao ianao dia ho tsaratsara kokoa ny fifandraisana.
HENOY NY AMBARAN’IZY IREO
Raha ny mikasika ireo ray aman-drenibe manokana dia tsy tambo isaina ny hafatra tian’izy ireo ampitaina aminao zafiny sy taranany. Izy ireo manko no vato namelan-kafatra, mahalala ny tantaran’ny razambe tany aloha. Izy ireo no ela nihetezana ka lava volo, ela niainana ka manana traikefa. « Ny fahafatesan’ny anti-panahy dia mitovy amin’ny tranom-boky iray kilan’ny afo » hoy ny fahendrena afrikana. Anontanio azy ireo ny fomba tena malagasy, atsafaho mikasika ny zava-niainany tamin’ny fanjanahan-tany izy ary fantaro ny heviny ny amin’ny zava-misy eto an-tanindrazana amin’izao fotoana izao. Ny amin’ireo indray mihira aminao indray na zanaky ny mpiray tampo na havana lavitra, manan-kambara aminao ko aizy ireo. Hotantarainy aminao ny hamafin’ny fiainan’ny tantsaha, holazainy aminao ny andavanandrony feno asa sy tolona, hoborahiny aminao ny faniriany mba hanohy fianarana ambony, hambarany aminao koa anefa ny fankahalany ny fahasimban’ny tontolo iainana sy ny rotoroto any an-tanan-dehibe.
ZARAO KOA IZAY FANTATRAO
Misy dadatoanay any ambanivohitra izay manam-pahalalana tokoa amin’ny lafiny rehetra : politika, toe-karena, finoana, kolontsaina, soatoavina malagasy sy ny hafa. Mahasondriana ery ny mihaino azy fa mahafinaritra koa ny miady hevitra aminy. Na tsy nandia fianarana lavitra aza izy dia takany izay hevitra tianao ambara, hany ka mazoto ery aho mizara zava-baovao aminy. Hoy angamba ianao hoe vitsy ny tantsaha no tahaka izany fa fambolena sy fiompiana ihany no fantany. Tsy maninona fa ampahafantaro azy tsikelikely ny tontolonao. Atombohy amin’ny fiainana andavanandro izany : ny asa fanao, ny raharaha sy ny fahazarana isan-karazany. Amin’izay mba misy ireharehany amin’ny namany hoe : « ilay havanay any antananarivo any, hono, manao an’izao sy izao ! » Avy eo, zarao aminy ny fivoaran’ny teknolojia sy ny fiazakazaky ny fandrosoana, ny lafitsara sy ny lafiratsin’ireny. Mety efa reny amin’ny onjam-peo ihany ireny fa mahaliana azy koa ny mihaino azy mivantana avy aminao.
Tadidio fa ny fifanakalozan-kevitra dia miteraka fifankahazoana am-po. Ny tena takiana aminao indrindra rehefa eny ambanivohitra dia ny fanetren-tena sy ny fahaizana mandray ny hafa amin’ny maha-olona azy. Tapitra androany ny lahatsoratra mitohy « Rehefa any ambanivohitra ». Antenaiko fa nitondra soa ho anao izy ireny ka mba hahay hankafy ny fialan-tsasatra eny ambanivohitra ianao.
ambanivohitra, fahaiza-miaina, fitiavan-tanindrazana, kolontsaina, maha-malagasy, teny gasy
ANDRIANIKO NY TENIKO, NY AN’NY HAFA KOA FEHEZIKO